Lozam-pifamoivoizana tany Ankazobe : Noraisin’ny fitondram-panjakana ny fikarakarana rehetra -
AccueilRaharaham-pirenenaLozam-pifamoivoizana tany Ankazobe : Noraisin’ny fitondram-panjakana ny fikarakarana rehetra
02/08/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nandray andraikitra avy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina, raha vao nandre iny lozam-pifamoivoizana tany Ankazobe iny. Izy tenany mihitsy no tonga teny amin’ny Hjra , nankahery ireo naratra tao amin’ny hopitaly. Nisy ny valopy fankaherezana natolony , 300 000 Ariary avy ho an’ny naratra ary 600 000 Ariary avy isaka ny aina nafoy ho famangiana araka ny fomba malagasy. Tsy vitan-tsetsetra tokoa ny loza tahaka izao, ka izay no antony nahatonga ny fitondram-panjakana nanefa ny valopy anjara adidiny. Niondrika teo anoloan’ireo fianakavian’ny mana-manjo ihany koa ny Filoha sy ireo mpiara-miasa aminy. Niroso tamin’ny famangiana ara-pomba malagasy avy eo. Efa vory marobe teny amin’ny Hjra mantsy ireo fianakavian’ny niharam-boina, ka ny solombavambahoakan’i Soaviandriana Itasy no nisolo vava an’ireo vahoaka ankilany. Tsapan’ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny fahasahiranan’ireto vahoaka ireto vokatr’ity loza ity. Ny loza rahateo tsy mampihomana. Nijoro ho ray aman-dreny izy ary namaly ny hetahetan’ireto vahoaka tra-doza avy any Soavinandriana Itasy ireto. Ho hiantohan’ny fitondram-panjakana avokoa ny lany rehetra amin’ny fikarakarana ny naratra. Toa izany koa ny fanaterana ny razana hatrany an-tanindrazany. Zava-dehibe amin’ny kolontsaina gasy tokoa mantsy ny fikarakarana ny razana ho tody any an-tanindrazany izany.
Zava-dehibe ho an’ireto vahoaka ireto tokoa ny fahitany fa miara-miombom-po aminy ny filoham-pirenena. Amin’ny andro sarotra toa izao no ilàna ny fananana ray aman-dreny. Nialohan’izao tokoa mantsy dia nisy ny antso nataon’ny fianakaviamben’ny Fjkm mba hijerena ny fanampiana izay azo hatao eo anoloan’ity lozam-piarakodia ity. Voavaly avy hatrany moa izay fangatahana izay.
Tonga teny amin’ny Hjra ihany koa ny praiminisitra lehiben’ny Governemanta Mahafaly Olivier notronin’ny mpikambana maro ao anatin’ny governemanta, izay nanamafy fa tsy maintsy hosaziana izay niavian’ny loza. Ny mpikambana maro eo anivon’ny governemanta, toa ny minisitry ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny andrim-panjakana Harry Laurent Rahajason, ny minisitry ny Mponina Onitiana Realy, ny minisitry ny Fahasalamana Lalatiana Andriamanarivo, ny minisitry ny Angovo Lanto Rasoloelisoa, ny minisitry ny Filaminam-bahoaka Andrianisa Jean Jacques, …ihany koa dia tonga teny an-toerana nanotrona ny Filoha. Tena delegasiona mafonja mihitsy araka izany no tonga nitsapa alahelo sy nandray andraikitra teo anatrehan’ity lozam-piarakodia ity.
Nitohy omaly tolakandro tany amin’ny kianja Tian Men ao amin’ny Lapan’ny vahoaka ny fitsidihina nataon’ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina mivady. Teo amin’io toerana io no noraisin’ny filoha sinoa Xi Jinping tamin’ny fomba manetriketrika izy mivady. ...Tohiny